Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Amaanka oo Sikulul Uga Hadlay Xaaladaha Itoobiya Kataagan.
Golaha Amaanka oo Sikulul Uga Hadlay Xaaladaha Itoobiya Kataagan.
War qoraal ah oo kasoo baxay Golaha Amaanka (UN Security Council) ee Qaramada Midoobay (QM) ayaa sheegaya in ay beesha caalamku ku qasbantahay in farogalin lagu sameeyo Itoobiya si wax looga qabto xaaladaha qalafsan ee kasocda gudaha wadanka Itoobiya.
Warkan kasoo baxay Golaha Amaanka ayaa lagu sheegay in dad kabadan 800 oo Oromo ah ay ku dhinteen Oromia halka 30,000 ilaa 50,000 oo qofna ay wadanka is kaga qaxeen intaas in kabadana ay xabsiyada kujiraan halka ay intii soo hadhayna kujiraan kacdoon ay kaga soo horjeedaan xukunka TPLF.
Dhinaca kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in Gobolka Axmaarada (Kililka Xabashida) ay mas’uuliyiintii xabashidu intooda badan ku biirayaan kacdoon-wadeyaasha taas oo sida qoraalka lagu sheegay xaalada uga sii daraysa, ku biiritaanka kacdoon-wadeyaasha ee xubnaha madaxda ah ayaa lagu macneeyay in ay sababtay gacanta birta ah ee ciidanka wayaanuhu ku hayaan shacabka banaan baxaya.
Sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in ay hay’adaha xuquuqul insaanka u dooda sanadadii ugu dambeeyay warbixino dhaadheer kasoo diyaarinayeen xuquuqul insaanka Itoobiya waxaana sida lasheegay wax kaqoray hay’adaha kala ah HRW, AL, HA iyo kuwo kale waxay hay’aduhu war bixintooda usoo gudbiyeen Golaha Amaanka, Ururka Midowga Africa (AU) iyo Baarlamaanka Midowga Yurub.
Warka ayaa intaas ku daraya in ninka UN-ta uqaabilsan dhinaca xuquuqul insaanku uu Itoobiya kadalbaday in ay ka jawaabto su’aalo ku saabsan tacadiyo lasheegay in ay ka dhaceen qaybo kamid ah Itoobiya balse codsigaas waxaa iska indho tiray Itoobiya oo aan waligeed kahadlin arimaha noocaas ah.
Sikastaba ha ahaatee xaaladaha kataagan Itoobiya ayaad moodaa in ay dunidu usoo jeedsatay sidii looga hadli lahaa waxaana wali halkoodii kasii socda qalalaasihii Itoobiya kasocday.